बुद्ध प्रेरणा- एक प्रेरक कथा - Jagaran Post
बुद्ध प्रेरणा- एक प्रेरक कथा
Jagaran Post २५ बैशाख २०७७, बिहीबार २२:४० जागरण
दिनेले दिए पनि – लिने ले नलिए पछि ?
उक्त बस्तु दिने कै मा त रहन्छ नि !
उतिबेला बुद्धको जमानामा पनि गाउँ/समाज भड्काएको, रितीरिवाज बिगारेको भनी उनलाई नराम्रो मान्ने केही/कोही थिए । आफुलाई प्राप्त ज्ञान बाड्न गाउँ समाज पुग्दै गर्दा बाटोमा दुख दिइ अवरोध पुर्‍याउने पनि थिए । त्यसैले त भनिन्छ नि मरेर गए पछि बल्ल उस्का गुण र असल पक्ष देख्न थाल्छ, समाज । कुनै चिजको अभाव हुँदा बल्ल त्यसको महत्व बुझे झै ।
कुनै दिन त्यस्तै मध्येका कोही एक रीसले चुर भै बुद्धको आश्रममा आइ अनाप सनाप गाली बकेछन । एक छिन हो र, दिनभर मनमा आएजती तथानाम गाली गर्दै गए । बुद्ध पनि शान्त चित्तले मुसु मुसु हास्दै सुन्दै रहे । साँझ पनि पर्दै गयो र उक्त ब्यक्ति केही थकित अनि गलित जस्तै बन्दै गयो । तब बुद्धले आफ्ना नजिकका कोही सहयोगीलाई आग्रह गर्दै भने कि, जाँउ उ थाक्यो होला, श्रद्धा एवं प्रेमपुर्वक भोजन गराउ ।
बुद्धको आग्रह सुन्ने बित्तिकै उनका सहयोगीले गाली गर्दै गरेका ब्यक्तिलाई श्रद्धा पुर्वक खाना खुवाउन लगे । उस्ले के भन्यो, त्यस्मा कत्ति पनि बिस्मात नगरी प्रेमपुर्ण व्यवहार गर्दै खाना खुवाए । तब सम्म गाली गर्दै गरेको ब्यक्ति धेरै अचम्मित र केही लज्जित भै सकेको थियो । तैपनी उस्को मनमा एक जिज्ञाशा प्रवल रुपमा उठिरहेको थियो ।
खाना खाइ वरी उक्त ब्यक्ति पुन बुद्धको समीप आई केही मथ्थर भै आफ्नो मनको जिज्ञाशा राख्यो र सोध्यो कि ‘दिनभर मैले गाली गरे, सरापे तर तिमीलाई कुनै प्रभाव परेन र उल्टै मुसुमुसु हासिरह्यौ । उल्टै खाना खुवाउन भन्यौ र खाइ आए पनि । यस्तो अचम्मित व्यवहार किन र के का लागि देखायौ ?’
अरुको आलोचना र कुरा कटाइमा के को चित्त दुखाउनु ? आफ्नो कमजोरी औल्याइदिए, राम्रै भो, सुधार्न पाइयो । हैन, बिनासित्ती र आधार कुरा काट्दैछ भने, त्यो स्वयं उसैले भोग्ने हो ।
तब बुद्ध पुन मुस्कुराए ।अनि कुनै बस्तु हातमा लिइ आफ्ना सहयोगीलाई लिन आग्रह गरे । अब उक्त बस्तु बुद्धको हातमा नभै लिनेको हातमा गै सकेको थियो । तब बुद्धले भने कि, ‘हेर, तिमिले कसैलाई कुनै चिज दिन चाह्यौ तर लिने ब्यक्तिले उक्त बस्तु/चिज लिन मानेन वा लिन उपयुक्त ठानेन भने दिन खोजेको बस्तु त तिम्रै हातमा त रहन्छ नि, होइन र ? ठिक त्यसै गरि तिमिले मलाई दिनभर दिएका गालिहरुलाई मैले गाली कै रुपमा लिइन र लिन जरुरी ठानिन भने तिमिले दिएका गालीका बचनहरु त तिमी सँगै त रहेनी, होइन र ? भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
तव, त्यो ब्यक्ति चकित भै आफ्नो कर्म प्रती केही लज्जित बन्यो । बुद्धको महानता अनि उदारता देखि नतमस्तक भयो । र यो पनि मान्यो कि महान ब्यक्ति/महापुरुषले सामन्य मानिसलाई जटिल लागेका त्यही कुरा अनि ब्यवहारलाई कसरी फरक तर सहज/सकारात्मक रुपमा लिने रहेछन् । त्यसै दिनबाट उक्त ब्यक्तिले पनि शान्त चित्त र आनन्दी मनको मुल केही हद सम्म चाल पायो । र शान्त एवं खुशी मन लिएर घर फर्क्यो ।
त्यसैले त आजकल मलाई पनि लाग्छ कि, अरुको आलोचना र कुरा कटाइमा के को चित्त दुखाउनु ? आफ्नो कमजोरी औल्याइदिए, राम्रै भो, सुधार्न पाइयो । हैन, बिनासित्ती र आधार कुरा काट्दैछ भने, त्यो स्वयं उसैले भोग्ने हो । बेक्कारमा म किन आफ्नो मन दुखाउँ ? यसरी सोच्दा त भएन र दुबै हातमा लड्डु !
महापुरुष गौतम बुद्ध प्रती हार्दिक नमन !
सबैको जयहोस !! सदा जयहोस !!!
भाईरल भिडियोमा कुटाई खाने युवती कल्पना चौधरी नभई
राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत `यो ज्यान मेरो नेपाल´ बोलको
EXCLUSIVE INTERVIEW : चितवन कारागारबाट रवि लामिछानेको पहिलो
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई रबि लामिछानेले आत्महत्या गर्न बाध्य
नेकपाका कार्यकर्ताले गौतमबुद्ध रंगशालाको कम्पाऊण्ड भत्काईदिएपछि यसरि भक्कानिए
यी पाकिस्तानी नागरिक जो सिंहसंगै यौटै बेडमा सुत्छन
दिल्लीका मूख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई थप्पड हानियो (भिडियोसहित)